Gịnị Mere Chineke Ji Gba Nkịtị E Gbukpọọ Ndị Juu Bi na Yurop? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon Frafra French Georgian German German Sign Language Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabuverdianu Kachin Kannada Kekchi Kikamba Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mapudungun Maya Mexican Sign Language Mingrelian Mongolian Moore Myanmar Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Talian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Ndị na-ajụkarị ajụjụ a bụ ndị e gbụrụ ndị nke ha n’oge ahụ e gbukpọrọ ndị Juu. Ha chọkwara ka a kasie ha obi, ọ bụghị naanị ka a zaa ha ihe ha na-ajụ. Ụfọdụ na-ewerekwa ya na mgbukpọ ahụ e gbukpọrọ ndị Juu bụ ihe ọjọọ kachanụ ụmụ mmadụ metụrụla. O meziri ka ọ na-esiri ha ike ikwere na Chineke.
Ihe ndị na-abụghị eziokwu ndị mmadụ na-eche gbasara Chineke na mgbukpọ ahụ e gbukpọrọ ndị Juu
Ụgha: Anyị ekwesịghị ịjụwa Chineke ihe mere o ji gba nkịtị ka e gbukpọọ ndị Juu.
Eziokwu: Ndị fere Chineke n’oge gara aga nwere mgbe ha jụrụ Chineke ihe mere o ji gba nkịtị ka ihe ọjọọ na-eme. Dị ka ihe atụ, Habakọk onye amụma jụrụ Chineke, sị: “Gịnị mere i ji mee ka m na-ahụ ihe ọjọọ, gịnịkwa mere i ji na-ele nsogbu n’anya n’anya? Gịnị mere e ji na-ebukọrọ ihe ndị mmadụ, na-emekwa ihe ike n’ihu m, gịnị mere esemokwu ji na-adị, gịnịkwa mere e ji na-alụ ọgụ?” (Habakọk 1:3) Chineke abaraghị Habakọk mba maka ajụjụ ahụ ọ jụrụ, kama, o mere ka e dee ihe ahụ ọ jụrụ na Baịbụl.
Ụgha: Chineke achọghị ịma ma ụmụ mmadụ hà na-ata ahụhụ.
Eziokwu: Chineke kpọrọ mmegbu asị. Ọ naghịkwa amasị ya ịhụ ka a na-ata ndị mmadụ ahụhụ. (Ilu 6:16-19) N’oge Noa, ime ihe ike juru n’ụwa ‘wutere Chineke n’obi.’ (Jenesis 6:5, 6) Anyị makwa nke ọma na mgbukpọ ahụ e gbukpọrọ ndị Juu wutere Chineke nke ukwuu.—Malakaị 3:6
Ụgha: Chineke ji mgbukpọ ahụ e gbukpọrọ ndị Juu taa ndị Juu ahụhụ.
Eziokwu: Chineke kwere ka ndị Rom bibie Jeruselem n’afọ 70. (Matiu 23:37–24:2) Mana, mgbe nke ahụ mechara, Chineke anaghịzi ahọrọ otu agbụrụ ọ ga-emere ihe ọma ma ọ bụ nye ntaramahụhụ. N’anya Chineke, ‘ọ dịghị ihe dị iche n’etiti ndị Juu na ndị mba ọzọ.’—Rom 10:12, Baịbụlụ Nsọ nke International Bible Society.
Ụgha: Ọ bụrụ na e nwere Chineke hụrụ anyị n’anya, nweekwa ike dị ukwuu, ọ gaaraghị ekwe ka e gbukpọọ ndị Juu.
Eziokwu: Ọ bụ eziokwu na Chineke anaghị akpata ihe ọjọọ, ma ọ na-ahapụtụ ka ihe ọjọọ mee mgbe ụfọdụ.—Jems 1:13; 5:11.
Gịnị mere Chineke ji gba nkịtị e gbukpọọ ndị Juu?
Ihe mere o ji gba nkịtị e gbukpọọ ndị Juu bụ otu ihe ahụ mere o ji gba nkịtị ka ụmụ mmadụ na-ata ahụhụ, ya bụ, ka a mata onye ọ bụ ya kwesịrị ịchị eluigwe na ụwa. Ihe Baịbụl kwuru mere ka o doo anya na ọ bụghị Chineke na-achị ụwa, kama na ọ bụ Ekwensu. (Luk 4:1, 2, 6; Jọn 12:31) Isiokwu dị n’ala ala peeji a kacha kọwaa ihe mere Chineke ji kwe ka ụmụ mmadụ na-ata ahụhụ. Ma, ka anyị kwuo ihe abụọ Baịbụl kwuru ga-enyere anyị aka ịma ihe mere Chineke ji gba nkịtị e gbukpọọ ndị Juu.
Ọ bụ ihe ọjọọ ndị mmadụ ji aka ha kpebie ime kpatara mgbukpọ ahụ e gbukpọrọ ndị Juu? Chineke gwara Adam na Iv ihe ọ chọrọ ka ha mee, ma, o nweghị mgbe ọ manyere ha ime ya. Adam na Iv họọrọ iji aka ha kpebie ihe bụ́ ihe ọma na ihe ọjọọ. Adam na Iv họọrọ ime ihe ọjọọ. Ihe a ha mere kpataara anyị ọtụtụ nsogbu. Ọ bụkwa otú ahụ ka ihe ọjọọ ndị mmadụ na-ahọrọ ime taa na-akpatara anyị ọtụtụ nsogbu. (Jenesis 2:17; 3:6; Ndị Rom 5:12) Ọ bụ otu ihe a ka akwụkwọ a na-akpọ Statement of Principles of Conservative Judaism kwuru. Ọ sịrị: “Ihe na-akpata ọtụtụ nsogbu a na-enwe taa bụ na anyị na-eji aka anyị ahọrọ ime ihe na-adịghị mma.” Chineke ejighị maka ihe a nara ụmụ mmadụ ikike o nyere ha ịhọrọ ime ihe ha chọrọ, kama, ihe o mere bụ ịhapụtụgodị ụmụ mmadụ ka ha na-eme otú dị ha mma.
Chineke ga-edozi nsogbu niile mgbukpọ ahụ e gbukpọrọ ndị Juu kpatara. Chineke na-ekwe anyị nkwa na ya ga-akpọlite ọtụtụ nde ndị nwụrụ anwụ n’ọnwụ, ma ndị Juu ahụ e gburu na Yurop. Chineke ga-emekwa ka ndị Juu ndị ọzọ a na-egbughị gharazie ịna-enwe obi mgbawa maka ihe ahụ merenụ. (Aịzaya 65:17; Ọrụ Ndịozi 24:15) Obi siri anyị ike na Chineke ga-emezu ihe a o kwuru n’ihi na anyị ma na ọ hụrụ ụmụ mmadụ n’anya.—Jọn 3:16.
Ọtụtụ ndị e gburu n’oge ahụ e gbukpọrọ ndị Juu fegidere Chineke ruo mgbe ahụ e gburu ha, ọtụtụ ndị nke a na-egbughị ka jikwa obi ụtọ na-efe Chineke. Otu ihe nyeere ha aka bụ na ha ghọtara ihe mere Chineke ji gbagodị nkịtị ka ihe ọjọọ na-eme, nakwa otú ọ ga-esi mee ka ihe ọjọọ niile kwụsị n’ọdịnihu.
Ahụhụ Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara Otú Ị Ga-esi Edi Nsogbu Udo na Obi ụtọ
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Mere Chineke Ji Gba Nkịtị E Gbukpọọ Ndị Juu Bi na Yurop?
ijwbq isiokwu 45